Jubbaland oo dacwad ka gudbineyso Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya +(Sababta) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Jubbaland oo dacwad ka gudbineyso Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya +(Sababta)
Jubbaland oo dacwad ka gudbineyso Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya +(Sababta)
Kismaayo (Halqaran.com) – Jubbaland ayaa sheegtay in ay dacwad rasmi ah ka gudbinayso Madaxa Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ahna masuulka u sareeya ee Ciidamada Amisom Amb.Francisco Madeira, Jubbaland ayaa ku eedaysan in uu lumiyay dhexdhexaadnimadii lagu yaqaan xafiiska uu hogaamiyo.
Madeire ayaa khudbad uu ka jeediyay golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay waxa uu ku sheegay in Jubaland aysan ka dhicin wax dib-u-heshiisiin ah balse ay Nairobi ku shireen dad isku qoys ah oo hal beel kasoo jeedda.
Qoraal kasoo baxay Madaxtooyadda Jubbaland waxaa lagu caddeeyay in Francisco uusan dhex-dhexaad ka noqon karin Arrimaha Soomaaliya isla markaana faragelin uu ku sameeyay siyaasadda dalka taasin ay ka hor imaanayso shaqada uu hayo.
Sidoo kale siyaasiyiin ka soo jeeda deeganada Jubbaland ayaa si caro leh uga hadlay hadalkii wakiilka midowga Afrika ee Somaliya, kuwaasi oo sheegay xadgudub inuu yahay hadalkaasi.
Dhawaan Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmsd Madoobe ayaa heshiis kula gaaray Magaalada Nairobi mucaaradkii Isbedel doonka Jubbaland, iyadoo halkaasi lagu soo afjaray isfahankii ka taagnaa Jubbaland.
Maamulka Jubbaland iyo dowladda Federalka Soomaaliya ayaanan ka dhaxeyn wax heshiis ah, islamarkaana dowladda wali ay ka careysan tahay hanaankii ay u dhacday doorashadii Jubbaland.